Home Wararka Nabaddoon Caan ahaa oo lagu dilay Gaalkacyo
Nabaddoon Caan ahaa oo lagu dilay Gaalkacyo
Kooxo hubeysan ayaa xalay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee uu ka arrimiyo dowlad Goboleedka Puntland waxaa ay ku dileen kid kamid ah Nabaddoonnada ugu caansanaa Gobolka Mudug, iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday.
Alle ha u naxariistee Nabaddoonka la dilay ayaa waxaa lagu Magacaabi jirya Nabaddoon Cabdiqani Xassan Waloore, waxaana la dilay xilli uu ka soo baxay Masjidka Macmuur ee xaafadda Garsoor oo uu ku soo tukaday Salaadda Cishaha, sida ay sheegeen goobjoogayaal.
Goobta lagu dilay Nabaddoon Cabdiqani ayaa waxaa horay loogu dilay Aabihiis Xasan Waloore, waxaana goobta gaaray qaar kamid ah ehellada Nabaddoonka, iyaga oo halkaasi ka qaaday meydkiisa.
Ciidamada Ammaanka Maamulka Puntland oo sidoo kale goobta gaaray ayaa sameeyay howlgallo ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyay dilka wallow aysan ku guuleysan inay qabtaan, waxaana weli dilkaasi ka hadlin laamaha Amniga Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Puntland.
Previous articlePresident Hassan Sheikh nominates Hamza Abdi Barre as PM
Next articleKulane iyo Biixi oo la sheegay inay ka dambeeyeen dhacdadii Gedo ee Talaadadii
MW Farmaajo oo shaqo ka joojin ku sameeyay Gudoomiyaha Maxkamada Sare
Maraykanka oo ku amray Farmaajo in uu ka jawaabo hadalkii Xasan...